Magaalada Beydhabo oo lagu wado inay kadhacdo Doorasho &Amaanka oo aad loo adkeeyey – Radio Baidoa
Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay ayaa lagu wadaa inay Maanta ka dhacdo doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed,iyada oo shalay ay khudbadahooda jeediyeen musharixiinta.
Ilaa Shan Musharax ayaa ku tartami doona xilka Guddoonka Baarlamaanka Koonfur Galbeed,kuwaas oo ku kala tartami doonaan laba u taagan xilka Guddoomiyaha,laba u tartameysa xilka guddoomiye kuxigeenka iyo mid u taagan qabashada xilka guddoomiye kuxigeenka labaad.
Magaalada Baydhabo ayaa aad looga daremayaa doorashada Maanta,waxaana aad loo adkeeyey amniga Guud ee Magaalada sigaar ah halka ay ka dhaceyso doorashada oo ah Xarunta Baarlamaanka.
Musharixiinta Maanta ku tartami doonta xilalka Guddoonka Baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa waxaa ay Magacyadooda kala yihiin.
Dad badan ayaa u saadaalinaya in xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka Koonfur Galbeed uu ku guuleeysan kara Xildhibaan Cali Saciid Fiqi oo ahaa Safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub ahan musharaxa uga cadcad.
Madaxweynaha DDS oo soo saarey Go’aano looga hortagayo COVID 19